Sida loo dar Lyrics in Songs toos ah iyo si fudud
> Resource > Download > Sida loo dar Lyrics in Songs in Dufcaddii
Haddii aad jeceshahay in aad la socoto gabyi markuu dhagaysanayo heesaha aad jeceshahay, waxaad heli kartaa lyrics soo bandhigay xaq shaashadda ciyaaryahan warbaahinta aad isticmaalayso, sida iPod, iPad iyo in ka badan. Badan CD-siin lyrics, laakiin heeso aad ka hesho ilo kale sida duubo, dooxeen inta badan ma waxaa ka mid ah lyrics in faylasha. Inkasta oo aad u isticmaali karto Lugood in lyrics daro in songs, waxaa jira talaabooyin badan oo in la raaco, sida helitaanka lyrics ugu horeysay ee internet-ka oo dhan naftaada iyo isaga oo intaa raaciyay in lyrics song kasta Lugood mid mid. Dad badan oo shaqo, miyaanay ahayn? Laakiin ma hadda ka welwelin. Halkan waa qalab weyn oo kaa caawinaya in aad lyrics heeso si toos ah iyo in Dufcaddii daro. Wondershare TidyMyMusic u Mac waa qalab dhan-in-ka mid ah iyo si sahlan loo isticmaalo. Aan hubi sida loo isticmaalo si ay u lyrics daro inay heesaha hoos ku qoran.
1 saar heesaha oo dhan barnaamijka
Marka hore kala soo bixi barnaamijkan iyo rakibi aad Mac. Marka aad u furo, waxaa smartly iskaan doonaa maktabadda Lugood aad ku darto heesaha oo dhan in. Markasta oo aad u ordaan, mar kale Lugood iskaan doonaa oo dajiyaan aad heeso cusub duubay ama lagu soo iibsaday.
Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay heeso badan ma abaabulay Lugood, u tag oo eynaan Music inay jiidi fayl in ay saxaarad file ama guji badhanka File Open in ay dajiyaan heesaha.
2 Raadi lyrics songs in Dufcaddii
Haddii aad rabto in aad ka heli lyrics u tiro badan oo ah gabayo, waxaannu ku talinaynaa function iskaanka barnaamijkan ka. Riix badhanka Scan in madax iyo sax checkbox ee Search for Songs Allaha. Markaas barnaamijkan ka heli kartaa lyrics u heesaha oo dhan in Dufcaddii. Oo weliba inta lagu jiro nidaamka baadhi ah, macluumaad kale sida farshaxanka album, magacyada track, artist iyo si ka sii daranba waxaa laga heli karaa.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad ka heli kartaa lyrics hal song qaarkood. Riix song iyo Codso button khaanadda saxda ah. Markaas barnaamijka ka heli doontaa lyrics xaq song in.
3 dar lyrics in heesaha oo dhan
Guji mid ka mid ah hees iyo hubi lyrics ay khaanadda saxda ah. Markaas riix batoonka codso in ay ku darto lyrics heesta. Waxa kale oo aad dooran kartaa dhowr heeso iyo codsan waqti isku mid ah.
Muuqaalada dheeraad ah:
Edit macluumaadka song lyrics ay ka mid yihiin: Guji Edit icon iyo buuxi duurka tafatirka la macluumaadka aad jeceshahay sida lyrics aad ka heli internet ka.
Saar songs nuqul: Tallaabada labaad ku xusan, haddii aad sax checkbox ee Search for labalaabka Songs oo guji badhanka Scan, barnaamijkan waxay heli doontaa gabayadii labalaabka maktabadda music aad. Markaas qashinka aad u guurto kartaa heeso la rabin.
Ma doonaysaa in ay isku day ah oo hadda? Just ka hor tagaan, waayo-aragnimo music weyn.
Top 10 Beddelka Facebook Video Player